Qorannoo Gaggeeffamu Keessa Hin Seenu : Jeff Seeshiins – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
WAASHINGITAN, DIISII — Raashiyaan filannoo prezidaantummaa Amerikaa keessaa harka qabaachuu fi qabaachuu dhaba ishee mirkaneessuuf qorannaa mootummaan Federaalaa gaggeessu keessaa kan hin senne ta’u abbaa alaangaa mummichii kan Yunaaytid Isteetes Jeff Seshiins beeksiisan.
Seeshiins Kamiisa kaleessaa oduu gabaastoota waliin kan wal argan yoo ta’u kunis gaazexaan waashingtoon post seeshiins filannoo Amerikaa dura Amerikaatti Ambaasaaddara Raashiyaa Sergee Kislyak waliin yeroo lama wal argan jechuun eega gabaasee booda.
Odeeffannoo kanas yeroo aangoo haaraa kanaaf muudamuu dura mana marii bakka bu’ootaa duratti falmii gaggeeffame irratti hin ibsine jedhee gabaase.
Seeshiins yeroo sana waa’ee filannoo prezidaantummaa Amerikaa Ambaasaaddara Raashiyaa waliin dubbataniiru yoo ta’e gaaffiin jedhu dhaga’amaa jira.
Kakatee sobe jechuun seshiins aangoo haa gadhisuu jedhu Demokraatonni hangi tokko.Seera tumtoonni hangi tokko paartilee lamaan irraa koree qorannaa gaggeessuu keessaa of- haa baasu jechaa turan